Cons विचारहरू भुक्तान गरिएको फेसबुक अभियानहरू विस्तार गर्न Martech Zone
"Advert%% सामाजिक विज्ञापनदाताहरूले [फेसबुक] लाई उनीहरूको सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको र सबैभन्दा उपयोगी सोशल मिडिया प्लेटफर्मको रूपमा छान्छन्।"
सामाजिक स्प्राउट गर्नुहोस्
निस्सन्देह, फेसबुक डिजिटल मार्केटरहरूको लागि एक शक्तिशाली उपकरण हो। प्लेटफर्म प्रतिस्पर्धाको साथ ओभरसिच्युरेट भएको सुझाव दिन सक्ने तथ्या points्क अंकहरूको बावजुद, त्यहाँ विभिन्न उद्योग र आकारका ब्रान्डका लागि भुक्तान गरिएको फेसबुक विज्ञापनको दुनियामा ट्याप गर्ने प्रशस्त अवसर छ। कुञ्जी, तथापि, कुन रणनीतिले सुईलाई सार्नेछ र सफलतातर्फ डो lead्याउँछ भनेर जान्नु हो।
सबै पछि, त्यहाँ सामाजिक मिडिया अभियान मात्रात्मक परिणाम ड्राइभ गर्न को लागी पर्याप्त अवसर छ। माथि उल्लिखित अनुसार सामाजिक स्प्राउट गर्नुहोस् अध्ययन, सामाजिक नेटवर्कहरू उपभोक्ता खरीदहरूको लागि प्रेरणाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो Inspiration 37% उपभोक्ताहरूले खरीद प्रेरणा पाइरहेका छन् च्यानल मार्फत। जे होस् ग्राहकहरू आफ्नो खरीद यात्रामा प्रारम्भिक छन् वा सक्रिय रूपमा खरीद वा कार्यको बारेमा विचार गर्दै छन्, असंख्य तरिकामा छुट नमान्नुहोस् जुन सामाजिक भुक्तानीले वास्तविक परिणामहरूलाई असर गर्न सक्छ।
एक कम्पनी जसले यस क्षेत्रमा सफलता फेला पारेको छ Readers.com, काउन्टर पढ्ने गिलासहरूको अग्रणी अनलाइन रिटेलर। सशुल्क फेसबुक अभियानहरूलाई प्राथमिकता दिई र पुनरावृत्ति परीक्षण प्रक्रिया लागू गरेपछि, ब्रान्डले महत्त्वपूर्ण राजस्व वृद्धि गर्न र नयाँ ग्राहकहरूको आमन्त्रित गर्न सक्षम भयो।
यो गाइड पाठकहरु को सफलताहरु मा झुकाउन को लागी र अन्य शिक्षाहरु लाई फेसबुक अभियानहरु लाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुर्‍याउने हो जुन मूर्त व्यवसाय मानमा रूपान्तरण हुनेछ।
निरन्तर ए / बी परीक्षण तैनात गर्नुहोस्
भुक्तान गरिएको फेसबुक अभियानहरू मार्फत व्यवहार गर्दा सामाजिक बजारले गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो गल्ती मध्ये एउटा हो कि यो प्लेटफर्ममा अघिल्लो सफलताको कारण यसलाई लक गरिएको छ। प्लेटफर्म सुविधाहरू, नीतिहरू, प्रतिस्पर्धा, र उपभोक्ता बानीमा लगातार परिवर्तनका कारण सशुल्क सामाजिक परिदृश्य लगातार परिवर्तन हुँदैछ। एन्ट्रोपीको कानूनहरू प्लेमा छन्, त्यसैले नयाँ अभियानका विचारहरू नियमित रूपमा विस्तार गर्न र बिभिन्न वैकल्पिक विचारहरूको पनि परीक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। बजारका रूपमा, हामीले निरन्तर हाम्रो धारणामा प्रश्न सोध्नु पर्दछ र अधिकतम परिणामहरू अधिकतम प्रभाव पार्ने परिवर्तनहरू खोज्नुपर्दछ। रचनात्मक परीक्षणको साथसाथै अत्यधिक-सूचकांकमा ध्यान नदिनुहोस्; रमाईलो गर्दा, हामीले लक्ष्यीकरण भेट्टायौं र प्रस्ताव भिन्नताहरू प्रायः लिभरेजको उच्च अंकहरू हुन्छन्। एक सुन्दर ढंगले डिजाइन गरिएको विज्ञापन र प्रतिलिपि जुन खराब लक्षित छ धेरै बहिरा कानमा र सम्भावित शिक्षालाई सीमित गर्दछ।
एउटा उत्कृष्ट उदाहरण बिंगबाट आएको छ, जसको खोज प्रति राजस्व छ A / B परीक्षणको कारण प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत बढेर २ percent प्रतिशत भयो, बाट एक अध्ययन हार्वर्ड व्यापारिक समीक्षा भेटियो। सफलता को मात्रा कि परीक्षण को रूप मा साधारण केहि आउन सक्छ को उपयोग गर्न को लागी आश्चर्यजनक छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, उच्च वेग परीक्षणले द्रुत शिक्षण चक्रमा र छिटो समय आरओआईमा अनुवाद गर्दछ।
यसबाहेक, माथि उल्लेख गरिए अनुसार, परीक्षण काम गर्ने नयाँ विचारहरू खोज्नको लागि मात्र होईन। यो सधैं विकसित हुने परिदृश्यको बारेमा पनि हो। ग्राहकका आवश्यकताहरू परिवर्तन हुनेछ, नयाँ व्यक्ति लक्षित डेमोग्राफिकमा पर्नेछन्, फेसबुकले नयाँ परिवर्तनहरू लागू गर्दछ जुन सम्भावित रूपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्दछ।
र कहिलेकाँही, यो आश्चर्यजनक परिणाम हुन सक्छ। यो एक विशेष शीर्षक मा एक मार्केटर को धारणाहरु लाई चुनौती दिन सक्छ।
यस अवस्थामा Readers.comजसको ब्रान्डि and र इमेजरी धेरै हदसम्म हल्का रंगीन पृष्ठभूमिमा निर्भर रहन्छन्, यो आश्चर्यजनक थियो जब फेसबुक ए / बी परीक्षणले ग्राहकहरु बढी आकर्षित भएको थियो र त्यस्तै फोटोको साथ धेरै संलग्न भएको थियो जसको पृष्ठभूमि अत्यन्त गाढा थियो। जे होस् प्रारम्भमा संयोग हो भन्ने धारणा भए पनि, निरन्तर परीक्षणले पत्ता लगायो कि उपभोक्ताहरू यस चित्रणमा बढी आकर्षित भएका थिए। अन्तमा, यसले ब्रान्डलाई भविष्यका अभियानहरू र अन्य च्यानलहरूमा समान दृश्यहरू परिचय गराउँदछ, जसले राम्रो प्रदर्शन गर्न जारी राख्यो।
उपभोक्ताहरूसँग निजीकृत, ओम्निकनेल सम्बन्ध खेती गर्नुहोस्
भुक्तान गरिएको फेसबुक विज्ञापन सफलताको कुञ्जी केवल खर्च र ROAS मात्र होइन; यो सम्भावित र अवस्थित ग्राहकहरु संग प्रत्यक्ष एक मा एक सम्बन्ध गठन गर्दै। यो आलोचनात्मक विज्ञापनदाताहरु यी निजीकृत सम्बन्धहरु मा दीर्घकालीन वफादारी ड्राइभ लगानी लगानी। यी विज्ञापनदाताहरूले राम्रो सीपीएको लाभ मात्र प्राप्त गर्नेछन, तर तिनीहरूलाई सम्भवतः लामो-पुच्छे हेलो प्रभावको साथ पुरस्कृत गरिनेछ ब्रान्डलाई मुखको वचन र रेफरल गतिविधि मार्फत।
जसले महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा पुर्‍याउँछ: मार्केटिंग संसारमा कुनै पनि चीज साइलोमा अवस्थित छैन। ग्राहकहरूले मार्केटरको 'च्यानलहरू' को लेन्स मार्फत विश्वलाई हेर्दैनन्। फेसबुक अभियानहरु यसको अपवाद छैन। ब्राण्ड र प्रदर्शन मार्केटि teams टोलीहरू सबै प्लेटफर्महरूमा एक मिल्दो र निजीकृत ब्रान्ड अनुभव सिर्जना गर्न लकस्टेपमा काम गर्नुपर्दछ। जसले यो बुझ्दछन् उनीहरूको प्रयासमा अझ बढी सफलता पाउनुहुनेछ।
यसका अतिरिक्त, त्यहाँ विपणनहरु को लागी धेरै प्रयासहरु को लागी तिनीहरुका प्रयासहरु मा निजीकृत गर्न को लागी गरीएको छ। उदाहरण को लागी, गतिशील विज्ञापनहरु रोजगार को लागी एक शानदार रणनीति हो, किनकि यसले ब्रान्डलाई बेसलाइन टेम्प्लेट सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन अवस्थित उत्पाद सूचीबाट तान्दछ। यसले निजीकरण अनन्त सरल बनाउँछ किनकि टोलीले दर्जनौं व्यक्तिगत विज्ञापनहरू सिर्जना गर्नुपर्दैन। चलाउन मिल्दैन फेसबुकको मेसिन शिक्षा एल्गोरिथ्मको शक्ति र सुन्दरता चलाउन चलान चलान चलान। थप रूपमा, यसले विज्ञापनहरू व्यक्तिगतको रुचिहरू वा आवश्यकताहरूसँग अझ राम्रोसँग पign्क्तिबद्ध हुनेछ भन्ने कुरा निश्चित गर्दछ, किनकि फेसबुकले गतिशील रूपमा उत्पादनहरू वा सेवाहरू फिचर गर्न सक्षम हुनेछ जुन प्रयोगकर्ताहरूले स्पष्ट र स्पष्ट रूपमा चासो व्यक्त गरेका छन्।
कार्य-प्रदर्शन अभिमुख भिडियो लागू गर्नुहोस्
एक समय, डिजिटल विज्ञापनहरू सबै स्थिर छविहरूको बारेमा थियो। यद्यपि सबै भन्दा अनलाइन चीजहरू जस्तै हामी पनि विज्ञापनहरूको उपभोग गर्ने तरिका हालसालका वर्षहरूमा विशेष गरी फेसबुकमा एकदमै परिवर्तन भएको छ। यस अनुसार Hootsuite, २०१ video देखि २०१ from सम्म १ 130० प्रतिशत लीप्ट सामाजिक भिडियो विज्ञापनमा खर्च गर्नुहोस्। त्यो संख्या मात्र वृद्धि हुन जारी रहन्छ। उपभोक्ताहरू स्थायी न्यूजफीड-आधारित विज्ञापनहरू मा चासो राख्दैनन् जुन एक पटक प्लेटफर्ममा प्रभुत्व जमाउँछन्, प्रश्न सोधेर: के मार्केटिंग टोलीहरू उनीहरूको विज्ञापनमा संलग्न र रचनात्मक रचनात्मक प्रयोग गर्न तयार छन्?
जबकि यी विज्ञापनहरूलाई थप प्रयासको आवश्यक पर्दछ, ती राम्रो परिणाम उत्पादन गर्दछ। उनीहरूले उपभोक्ताहरूलाई बढी प्रशस्त अनुभव प्रदान गर्छन् मात्र उनीहरू विज्ञापनदाताहरूलाई वास्तवमै अद्वितीय विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न लचिलोपन पनि दिन्छन्। भाग्यवस, त्यहाँ छनौट गर्न विकल्पहरू छन्। केवल गतिशील उत्पादन फिड भिडियो विज्ञापनहरू प्रदर्शन उन्मुख भिडियोको एक उत्कृष्ट उदाहरण होईन, पहिले उल्लेख गरिएझैं, तर छोटो-फाराम भिडियो, एनिमेटेड GIFs, कथा ढाँचा, र क्यारोसेल विज्ञापनहरू पनि विचार गर्न उत्कृष्ट विकल्पहरू हुन्। उपभोक्ताहरूले यी व्यक्तिगत र आकर्षक विज्ञापनहरूमा राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छन्, जसले अन्ततः शक्तिशाली प्रोपेलरको रूपमा काम गर्दछ।
के तपाईंको मार्केटिंग टीमका सदस्यहरू वा तेस्रो पार्टी पार्टनरहरू लगातार भिडियो कार्यान्वयन गर्न राम्रो-क्यालिब्रेट भएका छन्? प्रभावी भिडियो समाधानहरूले ठूला उत्पादन बजेटहरू प्रविष्ट गर्नुपर्दैन; हामीले DIY गुरिल्ला शैलीका भिडियो क्रियटिभको परीक्षणका केही उदाहरणहरूमा बराबर सफलता पाएका छौं। अनिश्चित छैन कि कहाँ सुरु गर्ने? मेट्रिक डिजिटल मा मान्छे भनिन्छ एक महान संसाधन कम्पाइल गरिएको छ विज्ञापन क्रिएटिव्ह बैंक मिलेर बनेको छ प्रेरणाको लागि बेस्ट-इन-क्लासले सामाजिक विज्ञापनहरू प्रदान गर्यो। भिडियो लिने दृष्टिकोणको बावजुद, यी गतिशील ढाँचाहरूको समाधान समाधानको रूपमा सामाजिक तवरमा जित्नको लागि आवश्यक छ।
सामाजिक मीडिया टोलीहरूको लागि पर्याप्त संसाधनहरू सुनिश्चित गर्नुहोस्
फेसबुक अभियान एक जनावर हो, कुनै श doubt्का छैन। यसैले यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि ब्रान्डहरूले पर्याप्त मात्रामा उनीहरूको टीमहरू तयार गर्दछन् र तिनीहरूलाई सफलताको लागि आवश्यक संसाधनहरू प्रदान गर्दछ। यसको विपरित, टोलीहरू जो संसाधन अवरोधले दबिएका छन् उनीहरूले अभियानको गति हराइरहेका भेट्टाउन सक्छन्, जसले उनीहरूलाई महत्वपूर्ण लक्ष्यमा पुग्न रोक्न सक्छ जुन अन्यथा हासिल गरिएको थियो।
सage्लग्नता एक परिणाम हो जुन टोलीहरू प्रायः तयार हुँदैनन्। फेसबुकको ठूलो असरलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञापन प्रासंगिकता मापन प्रदर्शन मा छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि टीमहरु समय समयमा ग्राहकको प्रतिक्रिया लाई प्रतिक्रिया दिन को लागी तयार छन्, जसको अर्थ अनौठो घण्टामा अपरेटिंग वा ग्राहक सेवा टोली संग काम गर्न मुद्दाहरु लाई कम गर्न को लागी हुन सक्छ। यी संसाधनहरू जहिले पनि दुई-पक्ष कुराकानीको रूपमा सञ्चालन हुन्छ जसले दुबै सामाजिक प्रमाण र सकारात्मक गतिको रूपमा कार्य गर्दछ। थप रूपमा, ध्यान दिएर विचार गर्नुहोस् कि स्केलिंग सशुल्क सामाजिकले तपाईंको हेडकाउन्ट आवश्यकताहरू र त्यस अनुरूप बजेटमा कस्तो असर पार्न सक्छ।
विचार गर्नु पर्ने अर्को स्रोत भनेको डाटा र ट्र्याकिंगको लागि स्वच्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। दुर्भाग्यवस, यदि राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको छैन भने, रिपोर्टि wild खराब हिसाबले गलत हुन सक्छ, किनकि गलत वा हल्लाले डेटा क्लाउड वा परिणामलाई भ्रमित गर्दछ। त्यसकारण, स्केलेबल र विश्वास योग्य एट्रिब्युसन पद्धति स्थापना भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न तपाईंको टोलीसँग काम गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसबाहेक, टोलीहरूले सही ट्यागहरू र सेटअप सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ताकि नयाँ विचारहरू परीक्षण गर्न सकिएन र त्यसलाई नाप्न सक्दछ। अभियान अन्धा बनाएर र आवश्यक स्रोतहरू फ्रन्टलोड नगरी सफल हुनको अवसरलाई नत्याग्नुहोस्। सावधानीको पक्षमा त्रुटि र कुनै पनि र सबै कुराकानीहरू ट्र्याक गर्नुहोस् जुन तपाईंको व्यवसायसँग सहजसँग सान्दर्भिक हुन सक्छ। आवश्यक भन्दा बढी डाटा सing्कलन गर्न योग्य छ, तर प्राय: टोलीहरूले महसुस गर्छन् कि उनीहरूले एक महत्वपूर्ण अन्तर्क्रिया पोइन्ट वा KPIs ट्रयाक गर्न बिर्सेका छन् र यो डेटा रेकर्ड गर्न तिनीहरू समयको हात फिर्ता पछाडि छोड्छन् भन्ने चाहना छोडे।
टीम संरचना भुक्तान सामाजिक अभियानको लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। यदि बाह्य एजेन्सीको मद्दत लिने छनौट गर्ने हो भने, ब्रान्डले ध्यानपूर्वक उनीहरूका विकल्पहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। लामो यात्रा भनेको मुट्ठीभर एजेन्सीहरूसँग काम गर्ने युग हो जुनसँग धेरै फरक च्यानलहरूमा उनीहरूको हात छ। यसको सट्टामा, ब्रान्डहरूले ती क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्दछ जहाँ उनीहरूले अधिक मद्दत प्रयोग गर्न सक्दछन् र तेस्रो-पार्टी विक्रेतालाई सूचीबद्ध गर्न सक्छन् जो उनीहरूको विशिष्ट कोठामा एक नेता हो। एजेन्सीहरूमा लगानी गरेर जो उनीहरूको विशिष्ट डोमेनमा विशेषज्ञहरू एक ठूलो भिन्नता हुन सक्छ।
जबकि फेसबुक एक पटक कलेज विद्यार्थीहरूलाई जडान गर्नको लागि रमाईलो ठाउँ थियो, अब यो राजस्व, ग्राहक अधिग्रहण, र असंख्य कम्पनीहरूको लागि ब्रान्ड जागरूकताको प्रमुख स्रोत हो। लगातार A / B परीक्षण परिमार्जन गरेर, ग्राहकहरूसँग बिभिन्न च्यानलहरू मार्फत व्यक्तिगत सम्बन्ध खेती गर्दै, प्रदर्शन-उन्मुख भिडियो कार्यान्वयन गर्दै, र सफलताको लागि टोलीहरू सेटअप गरिएको सुनिश्चित गरेर, ब्रान्डले फेबुलाई फेला पार्ने प्रभावकारी मार्केटिंग उपकरण हो।
टैग: ab testफेसबुक विज्ञापनहरूफेसबुक विज्ञापनहार्वर्ड व्यापार समीक्षासामाजिक अंकुरविज्ञापन रचनात्मक बैंक